Midsummer Night ရဲ့သတင်းကို | Apg29
523 online! | Sidvisningar idag: 152 920 | Igår: 172 883 |
Midsummer Night ရဲ့သတင်းကို
06:00 မှ 00:00 ထံမှအနည်းငယ်ညဥ့်ရဲ့သတင်းကို။ ဒီသတငျးသင်နံနက်သို့မဟုတ်တစ်နေ့တာအတွင်းမေးနိုငျသောအရာကို၏စိတ်ကူးများကိုပေးသည်။
Cagliari, အီတလီဘောလုံးကလပ် Cagliari ဂျူဗင်တပ်ကနေတသန့်ဆွီဒင်နိုင်ငံသား Albin Ekdal ကိုဝယ်ကြလော့။
အခုတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအကြမ်းဖက်သမားတွေအဖြစ်သုံးခေါငျးဆောငျမြား၏အုပ်စုသည် branded ။
ဆီးရီးယားကိုတူရကီဂျက်တိုက်လေယာဉ်ပစ်ချခဲ့ကြပေမည်လေယာဉ်ကိုရေထဲသို့ပျက်ကျခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံလစ်ဗျားနိုင်ငံမှာ TV မှာဘူတာရုံ။
နထေိုငျနိုငျ - psyche
နိုင်ဂျီးရီးယားရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးထုတ်ပယ်နိုင်ဂျီးရီးယားသမ္မတ Goodluck ယောနသန်သည်မိမိအကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနှင့်အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်သောကြာနေ့ကထုတ်ပယ်, သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကပြောပါတယ်။
båtjaktပြီးနောက်အိုင်ပေါ်မှာအဖမ်းခံရလူကိုလူသ midsummer ရက်နေ့ညနေပိုင်းမြောက်ဘက်Smögen၏Åbyfjordenအတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်ကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့နှင့်အတူbåtjaktနောက်ဆုံးညပြီးနောက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်, aftonbladet.se ရေးသားခဲ့သည်။
အတွက်ကြိုးစားခဲ့သည်လူသတ်မှုများအတွက်အဖမ်းခံရနောက်တစ်ချက်တစ်ခုမှာလူတစ်ဦး Kinna ဖြတ်တဲ့ဓါးများအတွက် midsummer ညဦးယံအချိန်ညဥ့်နေစဉ်အတွင်းဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါဓားဖြင့်ထိုးသည်လူအသက်ကိုခြိမ်းခြောက်ဒဏ်ရာနှင့်အတူ Sahlgrenska မှာညဦးယံ၌အစောပိုင်းကခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။
အတွက်မွေးစား၏နောက်ဆုံးစာသားအပြစ်တင်ဝေဖန်ရီယို, ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးလူမျိုး Rio de Janeiro မြို့အတွက်ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်ကုလသမဂ္ဂမှကမ္ဘာတွင် conference မှာသဘောတူညီခဲ့သည်မွေးစားခဲ့ပြီးကြောင့်နောက်ဆုံးအဆင့်စာရွက်စာတမ်းဝေဖန်ခဲ့သည်။
ရုံးတင်စစ်ဆေးအပေါ်ပါရာဂွေးသမ္မတရင်ဆိုင်ခဲ့ရစွပ်စွဲပြစ်တင် - တဲ့ "အာဏာသိမ်းမှု" ၏အမှုကပြောပါတယ်
Midsummer ဝ, တိုက်ပွဲတွေနှင့်လုယက်မှု
Midsummer ပွဲကျင်းပ, ယစ်မူးခြင်း, တိုက်ပွဲတွေနှင့်လုယက်မှု။ Midsummer ရဲ့နေ့ညဉ့်ကိုဆွီဒင်လျှောက်လုံးရဲအရာရှိများအတွက်အလုပ်ရှုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော်ဂိုအတွက်ကြောင့်VästraGötalandရဲများအတွက် command ကိုအလယ်ဗဟိုသည်နှင့်အညီ, သာမန်တနင်္ဂနွေထက်မပိုဆိုးလာခဲ့တယ်။
by ပညာရှင် Hans Jansson , Uppsala ဤစာတမ်း၏မက်ဆေ့ခ်ျကိုဘုရားသခင်၏စကားသံကိုကွားဒါပေမယ့်လည်းသူကပြောပါတယ်ဘာလုပ်မသာ၏အရေးပါမှုအကြောင်းပါ။ ဒါဟာအန္တိ, ပါလက်စတိုင်း၏စော်ဘွားဟေရုဒ်ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီအစားသူသညျဘုရားသခငျကိုစစ်တိုက်နှင့်သူ၏အသက်တာ၌ဘုရားသခင်၏စကားသံကိုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူနှစ်ခြင်းဆရာယောဟန်, သတ်အံ့သောငှါအားဖြင့်မောင်းနှင်ခဲ့ကြသည်။
တစ်ဦးကကလေးမွေးဖွားသည် - သူ၏အမညျတန်ခိုး
"ကျွန်တော်တို့အဘို့သူငယ်ကိုသူ၏ပခုံးအစွမ်းသတ္တိပေါ်မှာ။ သားကိုသနားသည်မွေးဖွားသည်, မိမိအမည်အားအံ့သြဖွယ်ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟု, တိုင်ပင်ဘက်, တန်ခိုးကြီးသော ဘုရားသခငျသညျ , ထာဝရအဘ, ငြိမ်သက်ခြင်းမင်းသား။ " (:69 သည်) ။
Sedan 23:42 2013-08-16 har det varit 464 078 909 sidvisningar på Apg29! Apg29 har just nu 17 122 bloggartiklar, 93 187 kommentarer och 61 230 bönämnen.